ကုန်းမြေပြင်မှထွက်ခွာပါ။ ကင်းဘရစ်ချ်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အပြောင်ဆုံး CINDIES အမှတ်တရများဖြစ်သောကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
ကုန်းကြမ်းကိုဖယ်ရှားပါ။ ကင်းဘရစ်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏အရိုးဆုံး Cindies အမှတ်တရများကိုမျှဝေကြသည်
သူတို့ကကောင်းသောအရာအားလုံးအဆုံးသတ်ပြီလို့ပြောပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောတာက Cindies ပိတ်လိုက်တယ် ငါတို့တစုံတယောက်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းတ ဦး တည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းဘရစ်အတွေ့အကြုံ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုမည်သို့နှုတ်ဆက်နိုင်မည်နည်း။
သင်၏အကြိုက်ဆုံးနှင့်အမှတ်ရစရာအကောင်းဆုံးအမှတ်တရပုံပြင်များအချို့ကို စုစည်း၍ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်းသောအမှတ်တရများအားနှစ်နာရီတန်းစီတွင်ရပ်နေခြင်းနှင့်သင့်အဆုတ်၏ထိပ်ဆုံးရှိ 'Come Eileen' ဟူသောအော်ဟစ်ခြင်းများကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကို toons ကိုင်တွယ်သောသူနှင့်အတူဇွန်လ 2019 Rumboogie မှတစ် ဦး အပြန်လမ်းမှာ (အကြွေး: Ballare ကနေတဆင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် )
ထို့နောက် Cindies ဟာအားလပ်ရက်လား။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စက်ဘီးကို Cindies မှပြန်လည်စီးနင်းနိုင်ရုံသာမကကမ္ဘာပေါ်တွင်စက်ဘီးကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရပ်ထားသည်ကိုမမှတ်မိပါနှင့်။ သို့သော်လည်းတစ်နည်းနည်းနဲ့, ငါတို့လေယာဉ်ပေါ်တက်နှင့်ငါ့သူငယ်ချင်းနှင့်အတူဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Cindies ပြီးနောက်နိုးသူတစ်စုံတစ် ဦး အကြောင်းကိုပုံပြင်နှင့်အတူအမှုအရာတို့ကိုချွတ်ကန်ပါတယ်။ ညဥ့်လွန်ပြီးနောက်လေဆိပ်သို့မည်သူမဆိုမည်သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်သာလွန်သည်၊ သို့သော်သင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကိုပိုမိုသိလိုပါကပုံပြင်အပြည့်အစုံပါသည့် Tab ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။
သူငယ်ချင်းများကိုဘ ၀ လေးခုဖန်တီးပေးခြင်း
ဟုတ်ပါတယ်, အတော်လေး Cindies ဆေးလိပ်သောက်areaရိယာကဲ့သို့လူမှုရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ကွန်ယက်များအတွက်နေရာမရှိပါ။ ပုံမှန်ညတစ်ညတွင်သင်သည်ကျပန်းအလွန်အမင်းယေဘူယျကြည့်ရှုသူကြည့်ရှုသူအားမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည့်စိတ်ပျက်ဖွယ်တီထွင်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပြီးသင်၏ထိပ်ဆုံးကိုချီးမွမ်းခြင်းမပြုမီသင်မတွေ့ဖူးသူတစ် ဦး ဦး ကိုခန့်မှန်းပြီးဆယ်စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင်သင်၏သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသစ်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်နောက်ကျောရှိအခြားသူများ၏ချွေးခြင်းခံစားချက်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မည် (Image credit: Author's own screenshot)
သို့သျောလညျး, ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောတစ်ချိန်က bouncer နေဖြင့်ကန်တယ်သူမ၏တစ် ဦး တောင်းပန်ကဒ်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏သူတစ် ဦး အဖြစ် Cindies ဖွားဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောအချို့သောပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောတင်ပြချက်များရှိခဲ့ပါတယ်, ယခုငါတို့အိမ်ထောင်ဖက်ပါပဲ။ Cindies မှထွက်ခွာခဲ့ဖူးသူကျွန်ုပ်တို့သိကြသောလူအများစုက၎င်းတို့သည်ရှင်းလင်းစွာမပြုမူဘဲရှင်းလင်းစွာထုတ်ပယ်ခံရရန်ထိုက်တန်စွာပြုမူခဲ့ကြသော်လည်းအပြီးသတ်တိုင်တန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များတွင်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ခိုင်မာခြင်း (နံရံများကပ်ထားသည့်ထောင်နှင့်ချီသောကုတ်အင်္ကျီတစ်ချပ်) ပါ ၀ င်သည်။ Genevieve Holl-Allen
စုစုပေါင်း get-withs နှင့်ကြီးမားသောနောင်တ
ဆေးလိပ်သောက်သည့်ofရိယာ၏နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုမှာလူများ၏တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မျက်နှာများကိုမျိုချခြင်း၏ထူးခြားမှုမရှိသောမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဆွဲဆောင်။ 'Love Story' ပေါ်လာသောအခါမည်သူ့ကိုမျှစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ဤဆေးလိပ်သောက်သည့်getရိယာသည်အလွန်ရှည်လျားသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်သွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီကိုရေးခိုင်းသည် - ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှစ် ဦး သည် Cindies တွင်ပထမဆုံးထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးယခုတွင်သူတို့နှစ်ချိန်းထားသည့်အချိန်ကတည်းကဖြစ်သည်။ အရမ်းအရှုပ်တော်ပုံဒါပေမယ့်အတော်လေးအကြိုးပွု! ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်မင်းတို့ငါတို့အတွက်မင်းကိုချစ်တာ။ အနည်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောအချစ်သည်သေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်အတည်ပြုနိုင်သည်။
'Love Story' အကြောင်းပြောခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲထာဝရစေးကပ်သော Cindies ကခုန်ရာနေရာ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကောလိပ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဆိုင်ရာအဆိုပြုလွှာများကိုသေချာပေါက်ကိုင်တွယ်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာတစ် ဦး ဖြစ်သူ Charissa ဟာဟယ်လိုဆင်စင်များမှာသူ့ကိုယ်သူအဆိုတင်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကြောင်နားရွက်များ ၀ တ်ထားသည့်နှင့်တွန်းလှန်သောဆာမူရိုင်းဓားကိုင်ထားသူတစ် ဦး သည်အံ့သြဖွယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်ကိုဆွဲထုတ်ခြင်းမခံရမီက (မျက်မြင်သက်သေများ၏တောင်းဆိုချက်အရအလွန်အဆင်ပြေသော DJ ဖြစ်ခြင်းသို့) ကျွန်ုပ်၏မျက်လုံးများကိုမဖယ်ရှားနိုင်အောင်နှေးကွေးစွာကခုန်ခဲ့သည်။ ဆူညံအော်ဟစ်သံများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နောက်ကွယ်တွင်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းနှင့်တစ်နေရာမှတစ်နေရာဆုံမိခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းပျောက်ဆုံးသွားသည်။ အမှန်တကယ်မမေ့နိုင်သောအခိုက်အတန့်။
မိသားစုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုရှင်းပြခြင်းသည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည် (Image credit: Charissa Cheong)
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပို့လိုက်တဲ့စိတ်ရှုပ်စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဒီလူတစ်ယောက်မှဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဟာ cindies အိမ်သာရဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်နာရီအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ အဆိုပါ cubicle ကြမ်းပြင်။ တစ်နာရီ ငါအဲဒီမှာဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတာကိုမမှတ်မိဘူး။ ငါပြောနိုင်တာက 10/10 အိပ်ငိုက်ခဲ့တယ်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ် ဤသည်နားလည်မှုထက်ကျော်လွန် GROSS ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလပ်ဖွင့်လှစ်ကတည်းကကကြမ်းပြင်ခြောက်သွေ့ကြောင်းကိုမထင်ပါဘူး ယခုသင် Cindies ပိတ်လိုက်, ငါတို့သည်သင်ပြန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်ရာမှာအိပ်ပျော်နေသောဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မတော်တဆ Promo-poster ကလေးများ?
Cindies ပြီးနောက်မနက်ခင်းနိုးလာပြီးသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်များကသူတို့၏ Instagram ပုံပြင်များတွင်များစွာသောဝမ်းနည်းဖွယ်ဓါတ်ပုံများကိုတင်ထားသည်ကိုသဘောပေါက်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မျှပျော်စရာမဟုတ်ပါ။ စုံတွဲတစ်တွဲသည်အနည်းငယ်ပိုမိုပျော်စရာကောင်းသောနှင့်ဆက်စပ်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတူရေးသားခဲ့သည် - သင်သည်နေ့ချင်းညချင်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကြော်ငြာ၏ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်ကိုသိရှိရန်နိုးထသည်။ Nik နှင့် Isobel တို့သည် Cindies ပွဲတစ်ခုတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအ ၀ တ်အစားကိုဝတ်ဆင်ကြသည်။ Ali G နှင့် Isobel တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ချာလီနယူတန်ကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန် VK ဘဝကိုသာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး paparazzi ကချစ်ခြင်းကိုခံစားနေရတယ်။ သူတို့ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများသည်အချိုရည်ကြော်ငြာပေါ်သို့အလျင်အမြန်ရောက်ရှိသွားသည်။ ဤသူတို့သည်အင်္ဂါနေ့တိုင်းပေါင် ၅ ဒေါ်လာဖြင့် VK သုံးယောက်သိကြသည်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်မြင်ကြပြီလျှင်၎င်းသည် BNOC စွမ်းအင်ပါပဲ။ လာမယ့်အသုံးအနှုန်းကိုလျာထားခံရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေ x
လိမ္မော်ရောင်ဘာသာစကားများကိုလူတိုင်းအားနှုတ်ဆက်ပါ (Image credit: Nik Sharma)
ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကို tequila ရိုက်ချက်များ၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်အမိန့်မပြုခဲ့ချင်ပေမယ့်ကြောက်မက်ဘွယ်သော Post- Cindies hangover ၏ခံစားချက်ကိုငါသိ၏ လုပ်ခဲ့တယ် အိပ်ရာမကျမီသင်၏စုစုပေါင်း clubbing အဝတ်ကိုချွတ်။ ဒီလိုမျိုးနဂါးနဂါးမျိုးကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရယူနိုင်တာဟာကျွန်ုပ်တို့ထဲကတချို့ဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းအောင်ဘယ်တော့မှမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုပါ။ ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည်အလွန်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေခြင်းကိုရှက်ရွံ့စွာမှတ်မိသောကြောင့် ၁၁ နာရီ ၅ မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ ဟောပြောခန်းမတစ်ခုလုံးသည်ကျွန်ုပ်ထွက်ပြေးလာသူကိုရယ်မောခဲ့ကြသည်။ ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉ နာရီမှာဟောပြောဖို့သင်ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ထိုကဲ့သို့သောအရှက်ကွဲခြင်းကျနော်တို့ပြင်းထန်တဲ့ညထွက်ပြီးနောက် ONLINE ပို့ချချက်အများစုလုပ်မရခဲ့ဘူး။ ငါ၏အကထိကတကယ်ငါ့ကိုတွေ့သွားမယ့်မှန်းပါ မရှိ ယခုမှစ။ အပေါ်နောက်ဆုံးညဥ့်ရဲ့မိတ်ကပ်၏တစ်နှစ်ခွဲမျက်နှာ။
၉ ယောက်ဘယ်သူလဲ (ပုံခရက်ဒစ်: Genevieve Holl-Allen)
သင်အမှန်တကယ်သင်ပစ်ချခြင်းကိုသိသောတစ်စုံတစ်ယောက်မပါဘဲ Cindies ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ် - သင်၊ ကလပ်ထဲတွင်သင်၊ ဤဆောင်းပါး၏ဤအပိုင်းတွင်မျှဝေရန်အဆုံးမဲ့စိတ်ပျက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များကိုသေချာစွာဖော်ပြထားသည်မှာသေချာသော်လည်းဤတင်သွင်းမှုကိုအထူးကြွေးကြော်လိုသည်။ ငါ tequila ပြီးနောက်ဂျွန်ဘားတွင်ကျွန်ုပ်လက်ကိုဆွဲချပစ်လိုက်သည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ, ပြီးတော့သို့ပွေးလေ၏။ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မေးခွန်းများစွာရှိပြီး၊ ထိုအော့အန်ခြင်းကိုမလွှဲမရှောင်ဝင်လာသူအတွက်ချက်တင်စကားပြောသော Fs များစွာရှိသည်။
အကောင်းတစ် ဦး ည၏အမှတ်အသား? (ပုံခရက်ဒစ်: Charissa Cheong)
အန်ချင်ခြင်းမှကင်းဝေးသည့်အပြင်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော (ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော) ခံစားနေရသောကင်းဘရစ်ခ်ျကျောင်းသားများမှကံဆိုးစွာဒဏ်ရာများပုံပြင်များအမှန်ပင်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာနက်နက်ဘတ်စကတ်ကိရိယာတန်ဆာပလာည၌ကျွန်ုပ်သည် Cindies ရှိပုလင်းတစ်လုံးပေါ်သို့ကျသွားပြီးခြေထောက်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ A&E သို့သွားရပြီး ၁၀ ရက်အကြာ Varsity ပွဲမတိုင်မီကျွန်ုပ်ခြေထောက်တွင်ချုပ်ခဲ့သည်။ ကဲကြမ်းပြင်အလယ်တွင် VK ကိုပိတ်ထားပြီးနောက်မှ (မထင်မှတ်ဘဲ) နောက်မှသိမ်မွေ့စွာဘေးထွက်မျက်စိဖြင့်မြင်နေရသည့်နောက်သူအားလုံးကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှောက်လိုက်သည်။ ငါတို့အားလုံးကိုတွေ့နိုင်တယ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကင်းဘရစ်ကလပ်တ ဦး ပိတ်လိုက်နှင့်အတူ, Addenbrooke ရဲ့မျှော်လင့်ညသန်းခေါင်ယံ၌နည်းပါးလာ visitors ည့်သည်များရလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်သူ့ဟာသူကောင်းစွာပြောနိုင်ပြီးအရက်နှင့်ဆက်နွှယ်သောထိခိုက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ အမ်မာမှဟင်နရီသည်သူ၏စာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအကြောင်းအရာကိုမျှဝေခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းခြင်းမပြုခင်ညဖြစ်သည်။ ငါခန္ဓာကိုယ်ရေးသားကိုးကားတစ် ဦး တည်းသာရေးသားခြင်းပြီးဆုံးဘူး။
သို့သော်လည်းမကြောက်ကြနှင့်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေတစ်နာရီပဲရှိတယ်။ ဒါဟာ cindies bindies tequilies ဆိုလိုသညျ။ ရိုင်းစိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း၎င်းသည်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ (၃၃၀) ပေါင် (သုံးစွဲ) သည်နောက်မှမီးခိုးရောင်ငန်းတစ်ချောင်းပေါ်မှမီးခိုးငွေ့ပေါ်ကျသွားပြီးမတော်တဆမှုအနည်းငယ်ကြောင့်ငါ၏သွားတစ်ဝက်သည်ပုလင်းပေါ်တွင်ပြတ်သွားသည်။
Andrew Meyer Tase ငါ့ကို bro t ကို Don
သငျသညျအစဉျအမွဲတစ် ဦး Cindies jaegerbomb (ကနေတဆင့် creditare Ballare) ကသားကောင်ခဲ့ဖူးလျှင်သင်၏လက်ကိုမြှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
သူက The Tab ကိုသူကိုယ်တိုင်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရဲ့အမေဖြစ်ခဲ့တာကိုပြောခဲ့တယ်။ နောက်တစ်နေ့နိုးလာတယ်၊ သွားမရှိ၊ ပိုက်ဆံလည်းမရှိ၊ အဆုံးသတ်ကိုနှစ်နာရီအတွင်းမှထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းအားပြန်လည်ချေမှုန်းဆဲဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုရပြီ ကောင်းပြီကစား, ဟင်နရီကစား။
80 မှ Cindies - ကျောင်းသားဟောင်းများတင်ပြ
ကျနော်တို့ Cindies Ballare, ဒါမှမဟုတ် Cinderella Rockerfeller တောင်မခေါ်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ကျောကလပ် Ronelle ရဲ့ဟုခေါ်တွင်သည့်အခါ 1980 ခုနှစ်, နောက်ကျောအစောပိုင်းကဘုန်းအသရေနေ့ရက်ကာလကိုပြန်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။
Ronelle ၏ပုံသဏ္personallyာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအနည်းငယ်သာသိသည်။ သို့သော် ၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သောကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ဤထိုးထွင်းသိမြင်မှုကများစွာပြောပုံရသည် - [ငါ့ရွယ်တူများထံမှ] တုန့်ပြန်မှုကယခုအချိန်အထိအများစုက၎င်းကိုမမှတ်မိနိုင်ကြောင်း၊ မပိုကြိုက်ပါ
နောက်ထပ်ကျောင်းသားဟောင်းတစ် ဦး ကအခြားတစ်ခြားကွဲပြားခြားနားသောရောင်စုံပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ငါတို့လေးယောက်သည်စနေနေ့ညတွင် ၀ တ်စုံပြည့် ၀ သောအဝတ်အစားဖြင့်သွားခဲ့ကြသည်။ Tequila shots တွေတစ်ညလုံးလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါတို့ကအရက်မူးနေတယ်။ တစ်ချိန်ကပြင်ပမှာငါတို့ (သင်ကဲ့သို့) ကခုန်ချင်ခဲ့ကြသည်။ အတွင်းမှလာသည့်ဂီတကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားနိုင်ပြီးပြင်ပနံရံတွင်ကခုန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရဲတွေဖြတ်သွားပြီးငါတို့တောင်းခံနေပြီမို့အချိန်အများကြီးကုန်နေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကိုရဲကားတစ်စီးထဲခေါ်သွားပြီးဘူတာရုံကိုခေါ်သွားတယ်။ ငါတို့စဉ်းစားမိတယ် ငါတို့ Cindies ဇာတ်လမ်းတွေကအရမ်းကိုဆိုးရွားလှတဲ့အရာပါ။
ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပတ်ပတ်လည်တက်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်ရန်အချိန်မရှိသောမရေမတွက်နိုင်သောအချိန်များနှင့်အမှတ်တရများရှိပါသည်။ Cindies ဆိုတာက icon တစ်ခုတည်းနဲ့မတူပါဘူး။ ပြီးတော့သူထိုက်သင့်တဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပေးဖို့စကားလုံးအလုံအလောက်မရှိပါဘူး။ သို့သော်ဤဗုဒ္ဓဟူးနေ့ - စင်ဒီများသင့်လျော်သောရည်ညွှန်းချက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်ခွင့်လွှတ်နိုင်လျှင် ABBA သည် (ရွန်နဲလ်လက်ထက်၌လည်းအစွန်းရောက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည့်) ဂီတအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် Cindies, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပျောက်ဆုံးရပ်တန့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဂီတအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဆိုပါဒိန်ခဲ, မမေ့နိုင်သောကြောက်မက်ဘွယ်သော, ဒါပေမယ့်လှပသောဂီတ။
• Cindies ကဟိုတယ်အသစ်အတွက်နေရာလွတ်တရားဝင်ဖွင့်ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်
•သတင်းကော်လံ - အပတ် ၆
•သင်၏ကောလိပ်အန်တီ ၇ - အိမ်ပြန်နှင့်အားလပ်ရက်များ